Krishna Dev Rimal | Nepali Stories
Krishna Dev Rimal
Krishna Dev Rimal – Antim Malami
कृष्णदेव रिमाल – अन्तिम मलामी
यतिखेर कसैले सोधेमा मैले आफू मलामी भएको परिचय दिनै पर्ने हुन्छ । मेरो अगाडि चिता दन्किरहेको छ । दागबत्ती दिनुभन्दा पहिले मूढाहरूको चाङमाथि शव सुताइएको थियो । मृतकका छोरा रमेश शोकाकूल थिए , विह्वल थिए । अनिवार्य नियतिलाई भोग्न बाध्य थिए र सो भोग्दै थिए । बत्ती लिएर तीन पटक लडखडाउँदै चितामाथिको शव घुमेपछि टक्क रोकिए रमेश । संस्कार—निर्देशकहरूको निर्देशन नसुनेर होइन, मन सुन्निएर तन नचल्नाले मात्र हो । रमेश एकोहोरो टोलाइरहे । मनको आँखाले जिउँदा बालाई पो देख्न थाले । पुरोहितको दोस्रो आज्ञा आएपछि झस्किएर उनी हल्लिए र हत्पतिए झैं गरेर बाबुको मुखमा दाग नामधारी बत्ती झोसे । कपूर,घिऊ, तुलसीको डाँठ,पराल अनि मसीनु पारेर चिरिएको समिधा हुँदै काला टुप्पा भएका पँहेला आगाका लप्काहरू यमानका मूढाहरूतिर सल्कँदै गयो । आगाको अघोर दन्काइभित्र शव अदृष्य हुँदै गयो । रमेश आँखा चिम्म पारेर आकाशतिर फर्किए । सन्नाटामय रातमा सबै मलामीहरू मसँगै रमेशका दायाँ बायाँ बसेर दृश्य दन्काउँदै थिए । रमेश आकाशतर्फ फर्किएपछि म पनि आकाश हेर्न थालेँ ।
शुक्ल द्वादशीको वृत्ताकारोन्मुख चन्द्रमा चिताको ठीक माथिको आकाशबाट आर्यघाटीय कृत्यानन्द लुटिरहेथ्यो । चन्द्रमाको छेवैमा एउटा गजवको तारा आफैंलाई सजाएर चम्किरहेको थियो । बाँकी आकाश कालो थियो । मर्नेहरू तारा बन्छन् भन्ने कथा सुनेको थिएँ । त्यो एक्ले ताराले मलाई कस्तो कस्तो बनायो । रमेशलाई तारा देखाउँ देखाउँ लागेर आयो तर यस युगमा यस्ता कुराले उनको आहत घट्ला भन्नेमा आफैँ अविश्वस्त भएँ र देखाउन सकिन ।
केही घण्टा अघि शिवपुरी लेक वर्षामय थियो । अहिले उर्लिरहेको वागमतीले सोको पुष्टि गरिरहेछ । आज वागमतीमा ढलको दुर्गन्ध छैन बरु पाँगो माटोको सुगन्ध आइरहेछ । हज्जारौँ घनमिटर माटो पानीसँग लुटपुटिएर बंगालको यात्रा तय गर्दैछ । वास्तवमा वागमती उर्लिएकै दिन त हो नि काठमाण्डु सफा हुने । हरेक सालको वर्षाले यस उपत्यकाको सभ्यतामा उर्जा थप्ने गरेको छ । सो आज पनि थपिएको भान भैरहेछ ।
वागमती नदी मानवको पर्याय झैँ पो लाग्छ त आजकल । साँच्चै दुबै उस्तै छन् । कुशासनको ढल मानव जीवन माथि छङ्छङी खसालिएका बखत ढलाम्य वागमती भन्दा मानव जीवन कति पो टाढा बोध हुन्छ र । अहो, आज वागमतीमा ढलको दुर्गन्ध छैन ! केवल धमिलो पानी बग्दैछ । वागमती ठूलो छ आज, त्यसैले ढलहले छोप्न सक्या छैन बरु अदृश्य भएका छन् तिनिहरूनै । मैले मनमनै भनें– चार दिनको चाँदनी फेरि अँधेरी रात नभैदिउन् वागमती त्यसैगरी, जसरी जनआन्दोलनका भेलहरूले भत्काएका अव्यवस्थाका पर्खालहरू मुटुको शूल बनेर नठडियून् जनजिन्दगीहरूमा ।
म ढलनगरस्थित कल्पनाकोठीमा घुिमरहँदा पुरोहितले म नजिकै बसेका रमेशलाई बोलाए । म झसङ्ग भएँ । रमेश चिता नजिकै पुगे । अलिकति चामल,जौ,तिल कुश अनि एउटा टिलो बाबुको चिता नजिकैको भुईँमा चढाए । अलिकता जल पनि चढाए । फर्केर मनेरै आएर बसे रमेश ।
पाटीको टुँडालमा एउटा बाँदर सुतिरहेको थियो । चिताको तातोमा ऊ आह्लादित झैँ लाग्थ्यो ।ऊ एक्कासी थाम हुँदै सुलुत्त तल झ¥यो । चिता नजिकै गएर टप्पाटपी चामल टिपेर खान थाल्यो । ऊ असाध्यै खुसी देखिन्थ्यो ।उसले मानिसलाई उपकारी प्राणी सम्झेझैँ लाग्थ्यो ।अनुग्रह मिश्रित आँखाले पुलुक्क मलामीको लामतिर हे¥यो । मलामीको मौनताले उसलाई अझै हौस्यायो अनि ढुक्कसँग पेटभरी चामल खायो । सिनित्तै पारेर चामल ननिखारेसम्म ऊ चनाखो भएर खाईरह्यो ।सकिएपछि फेरी टुँडालमै गएर मजाले सुत्यो ।यसरी लाशको आशमा टुँडाल कुर्ने अनि चिताको रापमा अलमस्त सुत्ने यस्ता बाँदरहरु यस देशमा कति होलान् भन्ने चिन्ताले म खग्रास भएँ ।
वाग्मतीपारी एउटा भजनटोली शिव आरतिमा तन्मय देखिन्छ ।शंकराचार्यकृत शिवस्तोत्र, रावणकृत शिवस्तोत्र र अन्य शिव भजनहरु संगीत सहित गुञ्जीरहेका थिए ।साँच्चै भजन शान्तीकारक अभिव्यक्ति रहेछ । साङ्गीतिक सघनताले पाशुपत क्षेत्रको आकाश घनिभूत भए झैँ अनुभव भइरहेथ्यो । आफन्त वियोगको पीडामय क्षणमा समेत संगीतले राहत पस्कँदो रहेछ । नत्र त रमेश बेला बेला चिताबाट ध्यान झिकेर पारी संगीत टोलमा नपु¥याउँदा हुन् नि । आफन्त वियोग र संगीत सामिप्यताको बिच सायद कुनै अन्योन्याश्रीत संबन्ध पो छ कि ।
अलिपरको एउटा अर्को चिताबाट बियोगपिडा विभुभर मडारियो ।नारी चित्कारहरु हाम्रा कानैसम्म आइपुग्यो । अरण्य रोदनको आवाजले अनायास म थाहै नपाइ उतै खिंचिएछु । चारवटी महिला मुख जोडेर अँगालामा बाँधिएर रुँदै थिए । रोदन मिश्रित आवाजहरु उति बुझिएनन् । अभिब्यक्त विरह नेपाल भाषामा भएकोले पनि कम बुझिएको हुन सक्छ । “ए माँ जित त्वता छाय् वना, जी गथे याना म्वाना च्वने ।” यस्तै थिए पिडाका स्वरहरु ।
जाने गैगए यसरि नरोए हुने नि । मेरो मनले अघिनै देखि भनेको कुरा यतिखेर प्वाक्क मुखबाटै निस्केछ । सुनेपछि एकजना मित्र मलामीले प्रतिक्रिया जनाइहाले । हम दो हमारे दो भन्ने कुरा बुझेका मान्छे यसरी रुँदैनन् ।
यो त भारतिय परिवार नियोजनको नारा जस्तो पो छ । नेपालीमा पनि यस्तै नारा छ — हामी दुई हाम्रा दुई । मैले प्रतिक्रिया जनाएँ ।
मित्र मलामी—त्यो त प्रष्टै छ नि ।
म —अनि अप्रष्ट चैँ के छ त ?
मित्र मलामी —यसको लाक्षणिक अर्थ छ ।
मित्र मलामी —’हम दो भनेको आत्मा र परमात्मा, हमारे दो’ भनेको शरीर र संसार । परमात्माको एक अणु आत्मा हो । हरेक आत्माहरु परम् आत्माबाट स्खलीत बुँदहरु हुन् जो पुनः परम् आत्मामा एकाकार हुन्छन् । आत्माको स्खलन आधार शरीर हो । शरीर सांसारीक भौतिक बस्तुहरुबाट निर्मित छ । यस अर्थमा संसारबाट स्खलित शुक्ष्म इकाइ शरीरहरु हुन् , जो पुनः परम् संसारमा एकाकार हुन्छ । आमा जीबको छातिमा बच्चाजीब खेलेजस्तै संसारको छातिमा शरीर रङमङीन्छ र समय भएपछि त्यही संसारमा मिल्न जान्छ ।
चिता पखाल्ने बेला भो । मृत शरीर खरानी बनेर वाग्मतीमा बग्यो । त्यही चितामा भर्खर सुताईएको भर्भराउँदो अनुहार भएको शव अब छैन । चीता उजाड छ । सबै मलामी फर्के म पनि फर्केँ । बाटाभरी अनेक तर्कनाहरु ज्वार झैँ उर्लिएको मन बोकेर हिडिरहेँ । स्वास्थ बजेटहरुको मलाम जान पाए हुन्थ्यो । किन यसरि उपचार नपाएका असामयिक मृत्युहरुको मलाम जान परिरहेछ । जीवनजलको कमिशन खानेहरुका मलाम जान पाए हुन्थ्यो । किन यसरि झाडापखालाको कारण मर्नेहरुको मलाम जान परिरहेछ । कुशाशनको मलाम जान पाए हुन्थ्यो । किन यसरि सभ्यताहरुको मलाम जान परिरहेछ ।
म घर आइपुगेको छु । मलामीको परिचय सकिनु पर्ने हो मबाट तर मलामीबोध अझै हटेन । रातभरी मलामी गैरहेछु जस्तो लाग्छ । कैले शुशाशनको मलामी जाँदैछु झैँ लाग्छ कैले सभ्यता मुर्दा भैmँ बाँधिएर मेरो अघि अघि चितातिर गैरहेछ जस्तो लाग्छ । हे मेरा मित्र मलामीहरु मलाइ अझै मलामी जान मन छ । एक पटक फेरि सबै मलामी जाउँ । एकैचोटी थुप्रै लाशहरु बोकेर मलामी जाउँ । अशिक्षाको हत्या गरौं र त्यसकै मलामी जाउँ । अविकाशको हत्या गरौँ र त्यसको मलामी जाउँ । अन्धकारको हत्या गरौँ र त्यसको मलामी जाउँ । समग्र कुशाशनको हत्या गरौँ अनि विजयोत्सव मनाउँदै त्यसकै मलामी जाउँ । आउनोस मित्रहरु म अघि लाग्न किञ्चित र किमार्थ हिच्किचाउँदिन । अव हामी अन्तिम मलामी जाउँ । हो अन्तिम मलामी जाउँ ।
Posted in Krishna Dev Rimal
Tagged Krishna Dev Rimal - Antim Malami Krishna Dev Rimal's Nepali Story Antim Malami Literary work of Nepali Story Writer Krishna Dev Rimal Literatures of Nepali Story Writer Krishna Dev Rimal Nepali Author Krishna Dev Rimal Nepali Katha Nepali Katha Antim Malami by Krishna Dev Rimal Nepali Kathakar Nepali Kathakar Krishna Dev Rimal Nepali Rachanakar Kathakar Krishna Dev Rimal Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Krishna Dev Rimal Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Krishna Dev Rimal Nepali Story Nepali Story Antim Malami by Krishna Dev Rimal Nepali Story Blog Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Krishna Dev Rimal Sahityakar Krishna Dev Rimal Ka Nepali Katha Haru